Faransiiska iyo Argentina oo badiyeen - BBC Somali
Image caption kooxda Argentina oo u dabaal degaya goolka ay iska dhaliyeen kooxda Bosnia.
Lionel Messi ayaa kooxdiisa Argentina u dhaliyay gool aad u quruxbadnaa oo ah kan ay ku badisay si ay u xoojiso loolanka ay ugu jirto inay ku guuleysato koobka ciyaaraha kubadda cagta dunida.
Argentina ayaa 2 gool iyo waxba ku garaacday Bosnia-Hercegovina.
Argentina ayaa daqiiqaddii seddaxaad heshay gool, kadib markii kubad uu laaday Messi uu iska dhaliyay Sead Kolasinac oo ah difaaca kooxda Bosnia-Hercegovina.
Qeybtii koobaad ee Ciyaarta ayaa ku dhammaatay hal gool iyo waxba, balse markii la isku soo noqday waxay labada dhinacba kordhiyeen weerarka.
Messi ayaa daqiiqaddi 65-aad ay isla heleen cagta isuna dhiibeen banooniga Gonzalo Higuain, waxa uuna ka gudbay laba difaac, wuxuuna dhaliyay goolkii labaad ee kooxdiisa u suurta geliyay inay hogaanka ciyaarta sii xoojiso.
Dunida oo dhan waxaa indhaha lagu hayay ciyaarta ugu horeysay ee Messi iyo guusha uu gaarsiin karay tiimkiisa.
Image caption Garsooraha oo kaarka cas u taagay mid ka mid ah ciyaartowyda Honduras oo Faransiiska ay isla ciyaareen.
Dhanka kale, Karim Benzema ayaa kooxdiisa Faransiiska rigoore u dhaliyay daqiiqaddii 45-naad.
Rigooradaasi ayaa ka dhalatay, markii difaaca kooxda Honduras ay qalad ku galeen diilinta 18-ka. Wilson Palacios ayaana laga saaray ciyaarta oo la siiyay karaka casaanka ah, taaso oo ka dhigay in 10 qof ay ku ciyaarto Honduras.
Markii ay socotay seddax daqiiqo qeybtii labaad ee ciyaarta, Faransiiska sare ayey u kacday rajadooda ahayd inay badiyaan, kadib markii ay goolkii labaad dhaliyeen. Waxaana u saxiixay Noel Valladares oo laad aad u qurux badan ka helay Karim Benzema.
Laacibka kooxda Real Madrid, ayaa hogaanka Faransiiska xoojiyay, markii uu dhaliyay goolkii seddaxaad, waxaana uu ahaa gool lagu murmi lahaa haddii aysan jirin tiknolojiyadda casriga ah.
Benzema ayaa dhaliyay goolkaasi, keenay in markii ugu horeysay la isticmaalo tiknolojiyad inta ay socdaan ciyaaraha sanadkan ay Brazil marti gelineyso.
Image caption Benzama oo u dabaaldegaya goolka seddaxaad ee uu dhaliyay
Garsooraha ciyaarta oo u dhashay Brazil, Sandro Meira Ricci ayaa si degdeg ah ku qaatay go’aan ka ah in goolkaasi uu dhashay.
Gool hayaha kooxda Honduras Valladares oo markii hore qabtay kubadda balse la booday ayaa waxa uu si rasmi ah kala gudbay leenka shabaqa, waxayna noqotay gool markii farsamada casriga ah iyo kaamerooyiinka ay muujiyeen.
Dadkii daawanayay ciyaarta ayaa ku murmay inaysan gool ahayn, balse muuqaalka tiknolojiyadda casriga ah ayaa laga siidaayay shaashad aad u weyn oo ku xiran karoonka Porto Alegre.
Faransiiska ayaana ku bidsay kullankoodii ugu horeeyay ee ay la yeesheen Honduras oo ay kaga badiyeen seddax gool iyo waxba.